Mogadishu Journal » 2018 » June » 1
Al-shabaab oo weeraray degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan
Mjournal :-Wararka ka imanaya degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal xoog leh uu gelinkii dambe ee maanta ka dhacay kadib markii ay soo weerareen xoogag ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka oo socday muddo saacado ah ayaa la sheegay inay labada dhinac ee ku...
Madaxweynayaasha maamulada KG iyo Hirshabeelle oo soo gaaray Muqdisho
Mjournal :-Waxaa maanta Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka soo degtay Diyaarad siday Madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Maxamed Cabdi Waare. Madaxdan ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay Wasiiro,...
Ra’iisul Wasaare Mariano Rajoy oo xilkii laga qaaday
Mjournal :-Baarlamaanka dalka Spain ayaa racdeeyay oo dibadda dhigay R/wasaare Mariano Rajoy ,kadib markii loo qaaday codka kalsooni kala labashada. Ilaa 180- xildhibaan ayaa codka ugu badan kaga soo horjeestay R/wasaaraha maanta oo Jimco ah,waxaana loo heystaa in isaga iyo...
Rag hubeysan oo toogasho lagu dilay magaalada Muqdisho
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya ay halkaasi ku toogteen labo ruux. Dilka ayaa ka dhacay Xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeenley sidda ay Risaala u xaqiijiyeen dadka...
Mjournal :-Amnesty International Hay’adda caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in Ciidamada Liyu Boolice ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay dhibaatooyin badan ka geestaan goobaha ay ku Nool-yihiin Qowmiyadda Oromiya ee Dalka Itoobiya. Hay’adda ayaa ugu Baaqday...
Khayre oo xero cusub ka hirgeliyay saldhigga tababarka Danab ee Bali-doogle
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, oo u weheliyo Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya iyo qaar ka mid ah Saraakiisha ciidanka ayaa shalay gelinkii dambe booqday Xarunta lagu tababoro Ciidanka Xoogga Dalka, gaar ahaan ciidamadda...
Mjournal :-Baarlamaanka Uganda ayaa ansixiyay sharci ku soo rogaya lacago canshuuro ah dadka isticmaala baraha bulshada sida Facebook,WhatsApp,Viber iyo Twitter.Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxaa ay bixin doonaan lacag gaareysa labo boqol oo shillinka Uganda ah taasoo u...
Mjournal :-Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiin C/laahi Xaaji Cumar (Camey) ayaa waxa uu ka hadlay xiisada colaadeed ee ka taagan degaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool, taasi oo u dhaxeysa Somaliland iyo Puntland. Wuxuu sheegay markale Madaxweyne ku-xigeenka...
Mjournal : -Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa weli adkeyneysa safkeeda xilli ciyaareedka dambe iyagoo horraan heshiis la gaaray Leon Goretzka oo kaga imaanaya kooxda Schalke 04. Naadiga difaacaneysa Bundesliga ayaa si lama filaan ah loola xiriiriyay weeraryahanka kooxda...